Maitiro Ekugadzirisa Yako Youtube Vhidhiyo uye Chiteshi | Martech Zone
Takaramba tichishanda pane yedu yekumisikidza gwaro kune vedu vatengi. Kunyange isu tichiongorora uye tichipa vatengi vedu izvo zvisiri izvo uye nei zvisiri izvo, zvakakosha kuti isu tipewo nhungamiro pane sei kuti gadzirisa nyaya.
Kana isu tichiongorora vatengi vedu, isu tinogara tichishamisika nekushomeka kwesimba kunoitwa mukuvandudza kwavo kuvepo kweYouTube neruzivo rwakabatana nemavhidhiyo avanoteedzera. Vazhinji vanongoisa vhidhiyo, woisa zita racho, wobva waenda. Youtube ndiyo yechipiri huru yekutsvaga injini kuseri kweGoogle uye zvakare inorumbidza Google Search Injini Result Mapeji. Kugadzirisa vhidhiyo yako kuchaita kuti yega yevhidhiyo yako iwanikwe mukutsvaga kwakakodzera.
Gadzirisa Yako YouTube Chiteshi
Kutanga, ita chokwadi chekufamba kuenda Customization in YouTube Studio uye tora mukana wezvinhu zvese kugadzirisa chiteshi chako.
Maitiro - Gadzirisa yako chiteshi karavhani uye yako yakaratidzwa vhidhiyo yekudzoka vanyoreri. Ive neshuwa yekuwedzera yakaratidzwa zvikamu - kana iwe uine akasiyana marudzi emavhidhiyo, heino nzvimbo yakanaka yekuwedzera imwechete playlists nevhidhiyo yako yazvino pane yega yega.
branding - Wedzera mufananidzo kune chiteshi chako, kazhinji logo yako, yakamisikidzwa kutenderera mufananidzo wekuratidzira. Wedzera chifananidzo chemabhena chinokwana 2048 x 1152 pixels asi nyatsotarisisa kuti mufananidzo unoratidzwa sei pane chimwe nechimwe chinobuda. YouTube inoita kuti iwe utarise yega yega. Zvakare, wedzera vhidhiyo watermark mukati mese mavhidhiyo ekuziva mhando. Ramba uchifunga kuti iwe hauise zvemukati pane yega vhidhiyo iyo inogona kunge yakavanzwa kuseri kwewatermark yako.
Basic Info - Ipa rondedzero huru yechiteshi chako iyo inokwezva vashanyi kuti vaone uye kunyorera kuchiteshi chako. Paunongowana vanyori zana uye chiteshi chako chave chiripo kwemazuva makumi matatu, gadzirisa yako URL ine zita remadunhurirwa renzira yechiteshi pane kiyi yakasarudzika inopihwa neYouTube. Uye zvinonyanya kukosha, wedzera zvinongedzo kune yako yekutanga info iyo inosundira vanhu kuti vadzokere kune yako saiti kana imwe nzira yemagariro.
Matipi mashoma ekugadzirwa kwevhidhiyo yako. Kunze kwekurekodha chaiko uye kugadzirisa kwevhidhiyo, usatarise izvi zvakakosha zvevhidhiyo usati waburitsa.
Audio - Wanga uchiziva here kuti vanhu vazhinji vanosiya vhidhiyo yezvinhu zvekuteerera pane vhidhiyo mhando? Ive neshuwa yekurekodha vhidhiyo yako neakakura maodhiyo ekushandisa kuti utore ruzha pasina maungira, reverb, uye kumashure ruzha.
Intro - Intro yakasimba inofanirwa kuisa toni yekuti sei vanhu vachifanira kuramba vachiona vhidhiyo yako. Vakawandisa vataridzi vanoona masekonzi mashoma vobva vaenda. Taura zita rako uye udza vanhu zvavanenge vachizodzidza kana vakaramba vakamira.
Outro - Kubuda kwakasimba nekufona-ku-chiito uye kwainoenda kwakakosha kuti muoni wako atore nhanho inotevera. Ini ndinokurudzira kwazvo kuenda URL, kana kunyangwe email kero uye nhamba yefoni, mumasekondi ekupedzisira evhidhiyo yako. Ive neshuwa iyo URL iri muvhidhiyo inoenderana ne URL yatinotsanangura mumatanho ari pazasi.
Youtube Vhidhiyo Optimization
Heano kuputsika kwezvatinotarisa kana tichiongorora vhidhiyo yemutengi yeYouTube:
Vhidhiyo Title - Vhidhiyo yako chiteshi inofanirwa kupa zita-rakapfuma zita. Parizvino, kuti iwe unosheedzera sei vhidhiyo yako ndiyo inonyanya kukosha chinhu. Youtube inoshandisa yako vhidhiyo zita remusoro wemusoro pane iro peji uye musoro waro. Shandisa mazwi akakosha kutanga, wobva waita ruzivo rwekambani:
Maitiro Ekugadzirisa Yako Youtube Vhidhiyo | Martech
Details - Paunongoisa vhidhiyo yako, iwe uchaona kuti kune akawanda, akawanda akawanda sarudzo dzekutsanangura ruzivo pane yako vhidhiyo. Kana iwe uri kukwezva vateereri vemuno, iwe unogona chaizvo kuwedzera nzvimbo kune yako vhidhiyo. Zadza zvese zvaunogona, zvese zvinobatsira kuona kuti vhidhiyo yako yakanyorwa zvakanaka uye yawanikwa! Ive neshuwa yekuronga mavhidhiyo ako muzvinyorwa zvekutamba futi.
Thumbnail - Paunongotarisisa yako YouTube Chiteshi nenhamba yefoni, unokwanisa kugadzirisa toni yemavhidhiyo yega yega. Nzira inoshamisa yekuita izvi kusanganisa zita rako mumufananidzo wevhidhiyo, heino muenzaniso kubva Crawfordsville, Indiana Roofer tiri kushanda pamwe, Cook Home Services:
URL Kutanga - Kana mumwe munhu akawana vhidhiyo yako uye vachiinakidzwa, vachazodzoka sei kune yako saiti kuti vataure newe? Mundima yako yerondedzero, nhanho yako yekutanga inofanirwa kuve yekuisa chinongedzo kumashure kune peji rekumhara raunoda kuti vanhu vashanyire. Isa URL yekutanga kuitira kuti igare ichionekwa neiyo truncated tsananguro munda iyo Youtube inogadzira.
tsananguro - Usangoisa mutsetse kana maviri, nyora tsananguro yakasimba yevhidhiyo yako. Mavhidhiyo mazhinji akabudirira anosanganisira iyo yese kudhindwa kwevhidhiyo zvizere. Kuve nekutsigira zvemukati pane chero peji kwakakosha… paYouTube zvakakosha.
Zvinyorwa - Vanhu vazhinji uye vazhinji varikuona mavhidhiyo nezwi radzimwa. Tumira vhidhiyo yako yekutora mazwi kuitira kuti vanhu vagone kuverenga pamwe chete nevhidhiyo. Iwe unofanirwa kuseta nemazvo mutauro wevhidhiyo yako uye kunyorwa kwayo, ipapo unogona kurodha pasi SRT faira inoenderana neiyo vhidhiyo nguva.
Tags - Shandisa ma tag zvinobudirira kunyora mazwi akakosha aunoda kuti vanhu vawane vhidhiyo yako. Kumaka yako vhidhiyo inzira yakanaka yekuwedzera kuoneka kwayo mukukosha kwekutsvaga kweYouTube.
Comments - Vhidhiyo ine yakakwira yekutaura chiitiko inowanzo kuve yakakwira zvakanyanya kupfuura mavhidhiyo asina mhinduro. Goverana vhidhiyo yako nevamwe vaunoshanda navo uye vaunoshanda navo uye vakurudzire ivo kuti vawedzere chigunwe-kumusoro uye chirevo pane vhidhiyo.
Views - Hausati wapedza! Simudzira yako vhidhiyo kwese kwese… mumablog mablog, pamapeji ewebhu, mumasocial network, uye kunyangwe nekuburitswa kwenhau. Izvo zvakanyanya kuona izvo vhidhiyo yako inowana, inonyanya kufarirwa ichave iri. Uye vanhu vanowanzo tarisa vhidhiyo nemaonero uye vanodarika avo vane mashoma maonero ekuona.
Vhidhiyo Sitemaps - Kana mavhidhiyo ari chikamu chakakosha chesaiti yako, iwe unogona zvakare kuda kugadzira vhidhiyo sitemap kana uchizvitsikisa pawebsite yako kana blog. Zvemukati mevhidhiyo zvinosanganisira emapeji ewebhu anonamira vhidhiyo, ma URLs kune vatambi vevhidhiyo, kana ma URL emavhidhiyo emavhidhiyo anogadzirwa panzvimbo yako. Iyo sitemap ine zita, rondedzero, play peji URL, thumbnail URL, uye mbichana vhidhiyo faira nzvimbo, uye / kana mutambi URL.
Kuzivisa: Ndiri kushandisa yangu yakabatana link ne Zvak, basa rakakura rekunyora vhidhiyo uye kunyorwa.
Tags: pedyo chinyorwakuvhura mashokogoogle webmastergoogle webmaster toolsgadziridza yako vhidhiyo yeYouTubeoptimize youtubesrt fairavhidhiyo yakavharwa zvinyorwaoptimization yevhidhiyovhidhiyo seovhidhiyo sitemapkudhindwa kwevhidhiyovhidhiyo xml sitemapYouTube chiteshi optimizationyoutube optimizationYouTube Videoyoutube vhidhiyo optimization
Heano gumi Nzira dzaunogona Kuwedzera Kubatanidzwa neZvino Zviratidzo